China Steel Core Galvanized Steel Wire Rope IWRC စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Bangyi
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ရောင်းချသော ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သုံးစွဲသူများအား ပံ့ပိုးပေးထားသောပစ္စည်းများ၊ OEM စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ နမူနာများအတိုင်း မှာယူခြင်း၊ နမူနာများဖြင့် စိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပို့ကုန်အမှာစာများဖြင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
1. တူညီသောအချင်းရှိ သံမဏိအူတိုင်ဝိုင်ယာကြိုးသည် ဖိုက်ဘာအူတိုင်ဝိုင်ယာကြိုးထက် ပိုကြီးသော ကွဲထွက်စွမ်းအားရှိပြီး ၎င်းတွင်ထမ်းရသောဝန်မှာလည်း ပိုကြီးပါသည်။
3. Steel Core ဝိုင်ယာကြိုးသည် အပူချိန်မြင့်မားသော ခံနိုင်ရည်ရှိမှုအရ Fiber Core ဝါယာကြိုးကြိုးများထက် ပိုမိုမြင့်မားသည်။မြင့်မားသောအပူချိန်အခါသမယအတွက် Steel core ဝါယာကြိုးကို ယေဘူယျအားဖြင့် ရွေးချယ်သည်။
5. ဖိုက်ဘာအူတိုင်စတီးလ်ကြိုး၏ ချောဆီသည် ဆီသိုလှောင်ရန်အတွက် သံမဏိ-အူတိုင်စတီးကြိုးကြိုးထက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။
၁၈၃၁ မှ ၁၈၃၄ ခုနှစ်ကြားတွင် ဂျာမန်သတ္တုတွင်းအင်ဂျင်နီယာ Wilhelm Albert မှ ခေတ်မီဝါယာကြိုးကို တီထွင်ခဲ့သည်။ Harz တောင်တန်းများရှိ မိုင်းတွင်းများတွင် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် ၎င်းတို့ကို တီထွင်ခဲ့သည်။ဤကြိုးသည် လျှော်ကြိုးနှင့် မနီလာကြိုးကဲ့သို့ အားပျော့သော သဘာဝဖိုက်ဘာကြိုးများနှင့် သံကြိုးကြိုးကဲ့သို့ အားနည်းသော သတ္တုကြိုးများကို အစားထိုးခဲ့သည်။
Albert ၏ကြိုးကို ကြိုးသုံးကြိုးလေးခုဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။1840 တွင် Robert Stirling Newall ဟုခေါ်သော Scot တစ်ဦးသည် ဤပုံစံကို မြှင့်တင်ခဲ့သည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် တစ်နှစ်အကြာတွင် အမေရိကန်ထုတ်လုပ်သူ John A. Roebling သည် ကြိုးတံတားများအကြောင်း ၎င်း၏အမြင်ကို ရည်ရွယ်၍ ဝါယာကြိုးများကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။အဲဒီကနေ တခြားစိတ်ဝင်စားတဲ့ အမေရိကန်တွေဖြစ်တဲ့ Erskine Hazard နဲ့ Josiah White တို့ဟာ မီးရထားလမ်းနဲ့ ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ ဝါယာကြိုးကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။၎င်းတို့သည် ဒေသအတွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ခရီးသွားလာရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် Ashley Planes ပရောဂျက်ဟုခေါ်သည့် အရာအတွက် ဓာတ်လှေကားကြိုးများပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ဝိုင်ယာကြိုးနည်းစနစ်များကို အသုံးချခဲ့သည်။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 25 နှစ်ကြာပြီးနောက် 1874 ခုနှစ်တွင် ဂျာမနီတွင် အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ Adolf Bleichert & Co. ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။Ruhr ချိုင့်ဝှမ်းကို တူးဖော်ရန်အတွက် ၎င်းတို့သည် ကြေးနန်းကြိုးများကို အသုံးပြု၍ ပျံသန်းနိုင်သော ရထားလမ်းများ တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။နှစ်အတော်ကြာပြီးနောက် ၎င်းတို့သည် Wehrmacht နှင့် German Imperial Army အတွက် ရထားလမ်းများ ဖောက်လုပ်ခဲ့သည်။၎င်းတို့၏ ဝိုင်ယာကြိုးစနစ်များသည် ဥရောပတစ်ခွင် ပျံ့နှံ့သွားပြီး New Jersey ရှိ Trenton Iron Works တွင် အာရုံစိုက်ကာ USA သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
နှစ်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ အင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်သူတွေက ဝိုင်ယာကြိုးကို ခိုင်ခံ့အောင်လုပ်ဖို့ အမျိုးမျိုးသော ပစ္စည်းတွေကို ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်။ထိုပစ္စည်းများတွင် သံမဏိ၊ ထွန်စတီး၊ တောက်ပသော ဝါယာကြိုး၊ သွပ်ရည်စတီးလ်၊ ဝါယာကြိုးစတီး၊ ဓာတ်ကြိုးနှင့် အခြားအရာများ ပါဝင်သည်။ယနေ့ခေတ်တွင် ဝါယာကြိုးသည် အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းအများစုတွင် အဓိကကျသည်။ကြီးကြီးမားမား သယ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့်နေရာတိုင်းတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် ဝါယာကြိုးများ ရှိပါသည်။
ယခင်- ကရိန်းအတွက် 19×7 မြင့်မားသော ဆန့်နိုင်အားရှိသော သံမဏိဝိုင်ယာကြိုး၊
နောက်တစ်ခု: လက်ကား Hula Fitness Gym ဖြုတ်တပ်နိုင်သော အနှိပ်ခံကွင်း
6*19+FC သံမဏိဝါယာကြိုးကြိုး 3-12 မီလီမီတာ
ကြိုးခုန်ဝယ်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခုန်ကြိုး, ကြံ့ခိုင်ရေးခုန်ကြိုး, ropeless skip ကြိုး, ခုန်ကြိုးကိုကိုင်တွယ်, ကြိုးခုန်တာ စမတ်ကျတယ်။,